Voin-kava-mahatratra, tolo-tanana hoan’ireo tra-boina noho ny (...)
Voin-kava-mahatratra, tolo-tanana hoan’ireo tra-boina noho ny rivo-doza :
Namaly ny antson’ ny Filoham-pirenena ho amin’ny fifanampiana ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa.
“Amin’izao voina mahazo ny mpiara-belona izao dia mitondra ny voatsirambin’ny tanana ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa hoan’ ireo tsy manan-kialofana vokatry ny fiakaran’ny rano noho ny rivo-doza nandalo teto amintsika. Ity hetsika ity dia natao amin’ny alalan’ ny firaha-mientana amin’ny ministeran’ ny mponina izay miahy ireo tra-boina ireo, ary indrindra indrindra hanehoana hatrany fa miara-miasa ny governemanta rehetra manohana ny ezaka lehibe ataon’ny Filoham-pirenena sy ny Praiminisitra lehiben’ny gouvernemanta” .
Manoloana izany, dia nanolotra kidoro 100 isa, bodofotsy 1200 isa ary paty 2500 isa ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa ny Pr ASSOUMACOU Elia Béatrice sy ireo delegasiona notarihiny avy ao anivon’ny ministera, ny alatsinainy 24 janoary 2022, teo amin’ny Kianja Barea, Mahamasina.
Nandray am-pitiavana ireo fanomezana ireo ny Minisitry ny Mponina Ramatoa SOAFILIRA Princia ary nisaotra sy nankasitraka ny Minisitry ny Fampianarana Ambony taminy tolo-tanana nataony. Nanao antso avo amin’ireo malala-tanana sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta ihany koa izy mba ho tonga maro hitondra fanampiana ho an’ireo traboina.
''Le danger qui menace les chercheurs aujourd'hui serait de conclure qu'il n'y a plus rien à découvrir.'' Pierre Joliot
© MESupReS 2009 - 2022
1868 visites par jour.